Dragalia Yakarasika ndiyo Nintendo nyowani ye iPhone uye ichasvika musi waGunyana 27 | IPhone nhau
Mapuratifomu efoni nderemberi, chiratidzo cheichi ndicho chido icho makambani akadai se Nintendo en batsira zviyo zvako zvejecha, kana kuti, mukuita bhizinesi ne iDevices nemamwe madivayiri akachenjera. Chinhu chakanakira Nintendo, uye zvakare chakatinakira isu nekuti pakupedzisira vanozopedzisira vavandudza mitambo yatinogona kufamba nayo kuenda kuNintendo yenyika.
Uye isu takatotaura newe pane imwe nguva nezve inogona kuve iyo nyowani Nintendo mutambo weiyo iOS, Dragalia Yakarasika, mutambo unounzwa kubva kune yakasarudzika consoles inoenderana nenyika yeJapan RPG. Zvakanaka, isu tatova neyekupedzisira zuva rekuburitsa: iyo inotevera Gunyana 27 tinogona kunakidzwa neinoshamisa Dragalia Yakarasika pane edu maDevices. Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvakadzama.
Ndizvozvo, Dragalia Akarasika anozosvika paIOS munaGunyana 27, zuva ratichazopedzisira kuyedza yechokwadi yeJapan RPG yakaunzwa naNintendo kune edu nhare mbozha. Ehe, iwe unofanirwa kuziva kuti iko kuvhurwa Izvo zvinongorongedzerwa chete United States, Japan, Hong Kong, Taiwan, uye Macao, nzvimbo dzakagara dziri vateveri vemhando iyi yemutambo wevhidhiyo (iwe unoziva kuti iwe unogona kugara uchigadzira account mune imwe App Store kuti uitore). Zvatichava nazvo: a Inofungidzirwa yakabhadharwa mutambo ine yakasarudzika interface yeRPG mitambo ine yekuJapan yekunyepedzera zvakawonekwa sei (sezvaungaona muvhidhiyo yapfuura).
Zvisinei, Hatigone kukanganwa kuuya kwaMario Kart kweIOS futi., kuvhurwa kunotarisirwa gore rinouya 2019 uye kwazviri Isu tichazoziva zvimwe panguva yekuratidzwa kweinotevera iPhones munaGunyana 12. Tichaona pane zvese, hongu, zviri pachena ndezvekuti Nintendo aona hanzi inoisa mazai egoridhe mumapuratifomu matsva enhare (nemvumo yayo yega), bhizinesi rinoramba richikwira pamitengo mikuru uye kubva kwariri isu tichaona zvimwe zvakawanda zvechokwadi. Tichagara takatarirwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dragalia Yakarasika ndiyo Nintendo nyowani ye iPhone uye ichasvika musi waGunyana 27
Kutanga Akonia Holographics, ndiko kutsvaga kutsva kweApple. Ivo vanogadzira lenzi kune akawedzera echokwadi magirazi